Besarety : Nofatorana sady norobaina ireo tompon-trano -
AccueilSosialyBesarety : Nofatorana sady norobaina ireo tompon-trano
04/01/2019 admintriatra Sosialy 0
Mahita tetika sy paikady vaovao hanaovana ny asa ratsiny hatrany ireo jiolahy. Tokantrano iray teny Soavinandriana Besarety no niharan’ny fanafihan-jiolahy, nofatorana ary notapenam-bava ireo tompon-trano, afakomaly, tokony ho tamin’ny 11 ora alina, rehefa tafiditra ny tranony avy namonjy lanonam-pianakaviana ireo tovolahy miisa telo.
Araka nambaran’ny nanatri-maso ny zava-nitranga, fito lahy nisaron-tava nirongo basy sy zava-maranitra no nanatanteraka ny fanafihana tamin’io alina io. “Nivoaka alina noho ny fanatrehana lanonam-pianakaviana teny Rasalama izahay telolahy, ary avy dia nandeha fiarakaretsaka nanatitra tany akaikin’ny trano. Marihiko fa mbola mandeha an-tongotra teo amin’ny antsasakadiny teo vao tonga ao amin’ny trano fonenanay izahay, hoy ny fitantaran’ilay lehilahy iray lasibatra.” Heverina fa efa nanaraka ireo olon-dratsy. Efa tafiditra soa aman-tsara tao amin’ny trano, izay sahabo ho telopolo minitra teo ireto tovolahy no nitsilo tamin’ny jiro mivantana ao amin’ilay trano fitaratra. Nihorohoro ireo tompon-trano, ary noterena izy ireo hamaha ny varavarana. Nony tafiditra dia nambanana basy ireto telolahy, ireo namany kosa nanao ny fandrobana. Tsy nihonona teo fa nofatorana sy notampenana ny vavan’ireo olona tao amin’ity tokantrano ity, ka tsy nahantso vonjy, ka lasa ny vola 1 hetsy Ariary, miaraka amin’ny finday miisa enina, ary firavaka teny amin’ireto tompon-trano. Vao vita izay dia lasa nandeha nivoaka mora ireo olon-dratsy, izay efa naharitra dimy ambin’ny folo minitra teo izany fandrobana miaro fampihorohoroana izany.
Tsy nisy aloha teto ny naratra, ary soa ihany fa tsy nisy volabe lasan’ireo jiolahy. Ny zavatra tsapa kosa anefa dia mbola tsy tena za-dalana amin’ny fanafihana ireo fitolahy. Raha ny fanazavana avy amin’ireo niharam-boina mantsy dia mety tsy ampy taona avokoa ireo nanao ny fanafihana fa iray tamin’ireo ihany no lehibe, izay tompon’ny atidoha. Raha zohina izany, mpanendaka eny manodidina eny ihany ireto lasa manao asa fanafihana ireto. Ny mbola mampametra-panontaniana kosa hatreto dia ny hoe avy aiza no nahazoan’izy ireo ny basy ?